Daryeelka baradhada inta lagu jiro iyo ka dib ubax - "Nidaamka Baradhada" Magazine
Inta lagu jiro ubax, sameynta degdegga ah ee digriiga waxay dhacdaa, tirada iyo xajmiga kuwaas oo si weyn ugu tiirsan shuruudaha ay duurka ubaxku ku beero. Intii lagu gudajiray muddadan muhiimka ah, baradhoku waxay ubaahan yihiin waraabis, dhaymo sare iyo ka ilaali kuwa lamid ah baradho baradhada Colorado.
Waxaan tixgelin doonnaa dhammaan saddexda dhinac ee daryeelka, iyo sidoo kale waxaan si gaar ah u falanqeeynaa kiisaska sababta barandhada aysan ubaxyada ubaxyada ama ubaxyada u soo muuqan mar labaad xilli xilliyeed. Badanaa waxay kuxirantahay noocyada kala duwan, laakiin mararka qaarkood wax ka qabashada beerta ayaa loo baahan yahay.
Noocyada baradhada ubaxa. Ninku digriiga uun buu u baahan yahay. Xitaa dusha sare, ee nafaqada badan ka soo qaata carrada, waxaa loo arkaa inay yihiin daruuri lama huraan ah oo ay tahay in loo adkeysto. Maxaan ka dhihi karnaa ubaxyada: waxay umuuqdaan inay yihiin dulin aan faaiido lahayn haba yaraatee, iyagoo si xiiso leh usoosaaraya waxa ugufiican geedka. Marka aragtidu waxay ku dhalatay inaad si weyn u kordhin karto dhalidda haddii aad ka saarto ubaxyada iyo caleemaha kore inta lagu jiro xilliga guntinta.
Laakiin baradhada ayaa ah noolaha cakiran oo ay la socdaan barnaamijkooda taranta, kaas oo digriiga ay u yihiin kaliya fursad ikhtiyaar ah oo lagu xafido dadka. Duurku wuxuu ka falceliyaa ka saarida burooyinkeeda iyo caleemaha sare taas oo khatar ku ah jiritaanka.
Geedka dhaawacmay wuxuu ku bukoon doonaa qaab fudud, ama wuxuu sameysan doonaa xitaa burooyin dheeri ah si loogu diyaariyo khasaaraha. Caadi ahaan, ubaxyada cusub ee lagama maarmaanka u ah horumarinta walxaha raad raaca waxaa laga qaadi doonaa digriiga. Xaalad caadi ah oo ay ku dhacdo avaristic laba jeer. Burooyinka cusubi ma soo muuqan doonaan haddii aad meesha ka saarto ubaxyadii hore u ifnay. Laakiin markaa howshu macno ma sameyneyso haba yaraatee, maadaama ubaxku ay horey u nuugeen nafaqooyin.
Khatar kale ayaa jirta. Meesha baradho waxaa hubaal ah inay jiraan ugu yaraan hal baadiyaha ah oo buka. Goynta burooyinkeeda iyo caleemaha, ninkii beerta ka shaqaynayay ma saarin aaladda iyo galoofiska ka dib markii la warshadeeyo geed walba, sidaa darteed, dhaawacyada furan ee caleemaha ku dhaca, wuxuu ku qaadsiiyaa cudurada fungal. Marka rabitaanka inaad waxyar kordhiso dalaga, waxaad waayi kartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa si tijaabo ah loo aasaasay in hal ama laba digriiga in ka badan ay dhab ahaantii ka samaysan yihiin duurka ubaxyada laga saaray marka loo eego dhirta ku baxda dabiiciyan. Laakiin haddii duurka u dhaawacmin, baradhada ayaa weynaada waxayna leeyihiin qaab joogto ah.
Waxaa lagu talinayaa in meesha laga saaro burooyinka kaliya marka la beero noocyo naadir ah oo loogu talagalay wax beero, marka tirada digriiga ay ka muhiimsan tahay cabirkooda.
Heerka ubax baradhada
Haddii aad ku aragtid duurka ubax badan - inta badan hortiinnu ku yaal - mid kasta oo ka mid ah noocyadii hore ee la xaqiijiyay. Dhawaan, kuwa digaaga ahi way qaniimeen noocyo ubax ah oo aad u yar ama xitaa ubax la'aan u baahan yihiin. Ugaarsiga ay duurka noocaas ah aad u yar tahay. Tusaale ahaan, noocyada cufan ee Rocco iyo Mariella ma ubax baxaan. Kala duwan guga xilliga xagaaga qalalan ayaa sidoo kale laga yaabaa inaysan ubaxbaxin, oo qoyaan caadi ah ay ubaxyo si dhakhso leh. Sariiraha lagu beeray hooska si fiican uma baxaan.
Ubaxyada baradhada si toos ah uma saameeyso sameynta iyo koritaanka digriiga, laakiin maqnaanshaha ubax badanaa waxay muujineysaa in ninkii beerta ka shaqaynayay qalad sameeyay isla markaana dalagga uu qatar ku jiro.
Marka lagu daro astaamaha kala-duwanaanta iyo xaraashka qisada, waxaa jira laba sababood oo dheeraad ah oo sababta baradhoku ubaxku ubaxyada ubaxin:
- dhirku qoyaan la'aan. Haddii waraabinta deg-degga ah aan loo habeynin, digriiga ma sii abuuri doono oo wuxuu ku kori doonaa dhulka, sidaa darteed, goosashada goosashada ee deyrta ayaa noqon doonta mid yaraada;
- in carrada - qoyaan xad dhaaf ah iyo Bacriminta nitrogen. Xaaladdan oo kale, jirridaha xoogga leh, halkii ay ka daboolan lahaayeen burooyinkoodii, jiifso. Waa lagama maarmaan in la joojiyo waraabinta, jarida dushooda dushooda (qiyaas ahaan afar meelood meel dhererka jirridaha), ka dibna ku dar ashkulka ciidda (hal galaas 1 mitir oo sariiraha ah), ka dabci dhulka oo si khafiif ah u duudsi duurka.
Cimilada qoyan, abaar dheer kadib, marmar waxay dhacdaa in baradhada uu ubaxayo mar labaad. Xaqiiqdu waxay tahay sababtoo ah kuleylka, digriiga ayaa joogsanaya inuu weynaado, oo marka roobab culus ay yimaadaan, “guga labaad” wuxuu u yimaadaa baradhada oo baadiyaha ayaa isku dayaya inuu sameeyo waqtiga lumay. Waraabinta waa ka hortaga si fiican dhibaatadan. Sidoo kale, duurka ubaxyada laga soo saaray burooyinkoodii ayaa si isdaba joog ah u biiri kara.
Waraabiyaa baradho inta lagu guda jiro ubax
Inta lagu gudajiro iyo ubaxa, duurka u baradhada ayaa u baahan qoyaan. Haddii roob uusan jirin, ka dib marka ubaxyada ugu horeeya ay muuqdaan, waraabiya dhirta si aad ah: sicirka ugu yaraan 3 litir oo biyo ah halkii baadiyaha. Baahida loo qabo waraabinta way fududahay in la go’aamiyo: waxay ku filan tahay in la taabto dhulka si qoto dheer ah 5-6 cm oogada sare ah. Hadday qoyan tahay, waxaa fiican inaad dib u dhigto waraabinta, maadaama qoyaanka xad-dhaafka ahi dhaawici karo digriiga dhalinyarada.
Baradhadu waa la waraabiyaa subaxdii ama fiidkii. Maalintii labaad ka dib, waxaad u baahan tahay inaad jilbaha ka dhigto carrada oo ay duudduubto duurka, si xididada u heli doonaan biyo kaliya, laakiin sidoo kale ogsijiin. Laba toddobaad ka dib, haddii ciiddu mar kale qalasho, waad ku waraabin kartaa sariiraha mar labaad.
Cimilada qalalan, ka dib waraabinta, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo dhulka leh mulch: hay qallalan ama caws engegan oo kale. Nidaamku ma qaadanayo waqti badan iyo dadaal badan, laakiin waa inaadan ka walwalayn xaqiiqda ah in xilliga dayrta, digriiga la qoday ay yarayn doonaan ama dillaacin doonaan.
Adkeynta baradhada ubax
Digriiga soo baxaya wuxuu u baahan yahay nafaqo la xoojiyay. Caadi ahaan, laba xidhashada dusha sare ee baradho ayaa la sameeyaa inta lagu guda jiro ubax:
- bilowga ubaxaynta si loo dardar geliyo ubax (hal mitir oo sariiraha ciidda ah ku dar 3 qaado oo ash ah oo leh qaado shaah ah oo ah sulfate potassium);
- 4-5 maalmood ka dib bilowga ubax tiro si loo dardargeliyo korriinsha digriiga (2 qaado oo ah superphosphate - halkii mitir toosan ee sariirta).
Sidoo kale bilowga gaysashada, labiska sare ee foliar waa la samayn karaa. Fursadaha ku dhowaad 10 litir oo biyo ah (boqolkiiba boqol mitir oo laba jibaaran oo baradho ah):
30-40 g oo ah urea;
50 g oo ah saliidaha sulfate;
10-20 g oo amooniyam amooniyam;
qas 2 g oo ah naxaas sulfate, 10 g oo ah cusbo cusbo, 40 g oo amooniyam, 200 g oo ah superphosphate.
Ka ilaalinta baradhada ubax ka dhir baradho Colorado
Dhibaatada ayaa ah in baradhada xilliga lagu jiro ubaxyada laguma buufin kimikooyin si loola dagaallamo kuwa lamid ah baradhada Colorado. Cayayaanka waa in lagu baabi'iyaa gacanta. Marka lagu daro aruurinta farsamada ee baaldi ku jirta, dawooyinka dadku waxay kaa caawin doonaan:
- garaac hal kilo oo ash ah, ku qas 10 l oo biyo ah, karkariyo markay qaboojiso - ku dar 40-50 g oo ah saabuun dharka lagu dhaqo oo lagu burburiyo grater ganaax ah;
- busta duurka leh leh galley.
Mid kasta oo ka mid ah lacagahaas waxaa loo isticmaali karaa ugu dhawaan 7-10 maalmood kasta. Haddii ay jiraan cayayaan aad u fara badan, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo ubax baradho leh shey bayooloji. Ku habboon, tusaale ahaan, Bitoxibacillin, Akarin ama Fitoverm.
Daryeelka baradhada ka dib ubax
Marka ubaxu baradho, waa wax aan suurtagal ahayn in waraabiyo duurka: huurka xad-dhaafka ah waa deegaan ku habboon horumarka dabaysha goor dambe. Quudinta sidoo kale looma baahna.
In kasta oo dushooda ay cagaaran yihiin, waxaa dhowr jeer lagu buufiyaa daawooyin dad ah oo loogu talagalay kuwa lamid ah baradho baradhada Colorado. Kiimikooyin adag ayaa la istcimaali karaa ugu dambeyn 2 bilood kahor goosashada. Sidaa darteed, lacagaha noocan oo kale ah waxay ku habboon yihiin oo keliya noocyada dambe.
ShareShare187Share133Si aad u soo diri
Botswana waxay ballaarisay liiska khudaarta laga mamnuucay soo dejinta